आयातमै निर्भर चाडपर्व (सम्पादकीय)
दशैँ सकिएलगत्तै हिन्दूहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार सुरु भइसकेको छ । दशैँतिहार ठूला चाड भएकाले धार्मिक, सामाजिक दृष्टिले मात्र नभई आर्थिक दृष्टिले पनि महìवपूर्ण छन् । यसैबेला वर्षभरिको कुल उपभोगको एकतिहाइभन्दा बढी उपभोग हुन्छ । उपभोग बढ्ने भएकाले विभिन्न सामानको कारोबार बढ्छ । यसले चाडपर्वका बेला नेपाली बजार चम्किएको देखिए पनि सरसामान आयातका लागि अर्बौं रुपियाँ देश बाहिर गइरहेको हुन्छ । हामीलाई आवश्यक पर्ने र उत्पादन गर्न सकिने ससाना सामानसमेत नेपालमा उत्पादन नहुँदा चाडपर्वकै बेला सबैभन्दा बढी रकम देश बाहिर जाने गरेको छ ।
तिहार फूलको चाड पनि हो । पूजाआजा र दाजुभाइलाई टीका लगाइदिएर फूलको माला लगाउनुपर्ने भएर मात्रै होइन, घर सजाउन पनि फूलको प्रयोग हुन्छ । त्यसैले वर्षभरिको फूलको खपतको ६० प्रतिशतभन्दा बढी तिहारमै खपत हुन्छ । फूलको करिब ९० प्रतिशत माग स्वदेशी उत्पादनबाटै पूरा हुने गरेको छ । पुष्प व्यवसायी सङ्घका अनुसार मुलुकमा वार्षिक एक अर्ब ८६ करोड ७१ लाख रुपियाँको फूलको कारोबार हुने गरेकोमा करिब ११ करोड रुपियाँको फूल विदेशबाट आयात हुन्छ । तिहारमा सयपत्री, मखमली र गोदावरीका लगभग २२ लाख माला आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यसमध्ये सयपत्रीकै मात्र १५ लाख माला चाहिन्छ । १२ लाख स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ । गोदावरी र मखमलीको सात लाख माला चाहिनेमा सबै स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ । अहिले कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, जापान, अमेरिकालगायत नेपालीको बसोबास रहेका देशमा तिहारमा मखमली फूलको माला निर्यातसमेत हुन थालेको छ । गत वर्ष दुई करोड ३७ लाखको फूल र फूलजन्य वस्तुको निर्यात भएको तथ्याङ्क छ । वि.सं. २०११ सालदेखि सुरु भएको पुष्प व्यवसाय आधुनिकीकरण र शहरीकरण सँगसँगै विस्तार भइरहेको छ । आ.ब. २०७४÷७५ सम्म आइपुग्दा लगभग सात सय पुष्प व्यवसायीहरू भइसकेका छन् र ४३ जिल्लामा व्यावसायिक पुष्पखेती विस्तार भइसकेको छ । हाल लगभग १५५ हेक्टर क्षेत्रफलमा पुष्प व्यवसाय भइरहेको, ४३,५०० भन्दा बढी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा पुष्प व्यवसायमा आश्रित व्यक्तिहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराइरहेको, तिहारमा दियो तथा पाला, फलफूल, मिठाइ, कपडा, मैनबत्ती, घर सजावटमा प्रयोग हुने वित्तीय सामग्रीको प्रयोग पनि बढ्छ । दियो तथा पाला मात्र स्वदेशी उत्पादनले धानिरहेको छ । अन्य सामग्री भारत तथा चीनबाट आयात हुन्छ । खासगरी ड्राइफ्रुट आयातित वस्तु हो । पछिल्लो समय तिहारमा घर उज्यालो बनाउन इलेक्ट्रिक बत्ती, झिलिमिली बत्तीको प्रयोग बढ्दो छ । यो अधिकांश चीनबाट आयात हुन्छ । मैनबत्ती देशभित्रै बनाए पनि कच्चापदार्थ भने भारतबाटै आयात हुन्छ । कृषि प्रधान मुलुक नेपालको भौगोलिक तथा प्राकृतिक विविधतामा फलफूललगायतका कृषि उत्पादनको सम्भावना धेरै छ । पुष्प व्यवसायको विकास तथा प्रवद्र्धनको सम्भावना अझ बढीे छ । तर पनि फलफूलको निकै ठूलो हिस्सा आयातमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था सुखद होइन ।
आयातित वस्तुको उपभोग बढ्दा बजारको कारोबार त बढाउँछ तर यसका लागि ठूलो मात्रामा पुँजी विदेशिन्छ । आयातमै निर्भर रहनुपरेकाले चाडपर्वमा बढ्ने कारोबारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सकिरहेको छैन । उपभोग्य वस्तुको उत्पादन स्वदेशमै गर्न सके त्यसका लागि विदेशिने रकम जोगिने मात्र नभई रोजगारी सिर्जना हुन्छ । पुष्प व्यवसाय अहिले उद्योगको रूपमा अगाडि बढिरहेको भए पनि यसको दिगो विकास, गुणस्तरीय उत्पादन, आन्तरिक बजार व्यवस्थापन, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा उत्पादन नहुने सामान आयात गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि भाइमसलाका रूपमा प्रयोग हुने, सुख्खा फलफूल र खानेकुरा, उपहारमा प्रयोग हुने कपडा, टोपीलगायतका सामान पनि नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसले पुँजी पलायन रोकिनुका साथै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्छ । तर उपभोग हुने अधिकांश सामान आयातित हुनु चाहिँ चिन्ताको विषय हो । त्यसैले उपभोग्य सामग्रीको आयात प्रतिस्थापन गर्दै स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने नीति आजको आवश्यकता हो ।